ချောင်းသာကမ်းခြေ တပ်ပိုင်မြေ ကျူးကျော်သူ ၂၀၀ ကျော် တရားစွဲခံရ ~ .
အစိုးရက သိမ်းယူပြီး စစ်တပ်ကို ပေးအပ်ခဲ့သော မြေပေါ်တွင်
ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံ တခု (ဓာတ်ပုံ – ဆလိုင်းသန့်စင်)
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ ချောင်းသာကမ်းခြေရှိ လက်ရှိတပ်ပိုင်မြေများပေါ် ကျူးကျော်သည် ဟူသော ဒေသခံ ၂၀၀ ကျော် ကို အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (နတခ) က ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုဒေသခံများကို ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု ပုဒ်မ ၄၄၇ ဖြင့် ပုသိမ်မြို့နယ် တရားရုံး၌ တရားစွဲဆိုထား ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစွဲခံရသူများ သည် ကျူးကျော် နေထိုင်သူ ၂၀၉ ဦး နှင့် မူလ မြေပိုင်ရှင်များ၏ သားသမီး ၁၃ ဦး ပါဝင်ကြောင်း တရားစွဲခံရသူများက ပြောသည်။
ပုသိမ်မြို့နယ် ရွှေသောင်ယံ မြို့နယ်ခွဲ ချောင်းသာ ကျေးရွာရှိ တပ်ပိုင်မြေ ၃၃.၉၆ ဧကပေါ်တွင် မူလမြေပိုင် ရှင်များက ခြံစည်းရိုးများ ကာရံခဲ့ပြီး အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် အတွက် နတခက ချောင်း သာ ရဲစခန်းတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက တကြိမ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တကြိမ် အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်တွင် ပုသိမ်မြို့နယ် တရားရုံး၌ တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မူလ မြေပိုင်ရှင် သားသမီး တဦးလည်း ဖြစ်ပြီး တရားစွဲ ခံနေရသည့် ချောင်းသာ ကျေးရွာမှ ဒေါ်သန်း အုန်းက“ကျမတို့ကို နတခက ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး သက်ထွန်းက တရားလိုလုပ်ပြီး တရားစွဲထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားစွဲ ခံနေရသူ(မူလမြေပိုင်ရှင် သားသမီး)က ၁၃ ဦး ရှိတယ်။ အကုန်လုံးက အရင်တုန်းက မြေသိမ်း ခံခဲ့ရတဲ့ မူလ မြေပိုင်ရှင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလက ချောင်းသာ ရဲစခန်းကနေ ကျမတို့ကို ပုသိမ် တရားရုံးကို ခေါ်သွားပြီး ရုံးတင်ခဲ့တယ်။ အာမခံပေးမယ့် လူက ၂ ဦးပဲ ခေါ်သွားမိလို့ ခံဝန် လက်မှတ် ထိုးဖို့ အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ တရားရုံးက နောက်တကြိမ် ထပ်ခေါ်မယ် ပြောတယ်”ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြေသိမ်းစဉ်က အသီးရှိသည့် အုန်းပင် တပင်လျှင် ၃၅၀ ကျပ်၊ အသီး မရှိသည့် အုန်းပင်ကို ၂၀၀ ကျပ် နှုန်းသာ လျော်ကြေး ပေးခဲ့ ကြောင်း၊ ချောင်းသာ ဒေသခံများ ဓားမဦးချ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့ သည့် မြေများအတွက် လျော်ကြေးပေးခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း ဒေသခံ များက ပြောသည်။
ယင်းမြေများပေါ်တွင် တပ်ပိုင်ဧည့်ရိပ်သာတခု ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြေလွတ် ၁၅ ဧကခန့် ကျန်ရှိနေခဲ့ကြောင်း၊ တပ်ပိုင်မြေများ ပြန်ပေးရန် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ကျူးကျော်သူများ ၀င်ရောက်နေထိုင်မည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် ခြံစည်းရိုးများ ကာရံ၍ အဆောက်အအုံများ ဆောက် လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ချောင်းသာဒေသရှိ မူလမြေပိုင်ရှင်များ၏ သားသမီးများက ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ မြေတွေကို တပ်က ၁၉၉၆ ခုနှစ်က သိမ်းသွားပြီးတော့ အဆောက်အအုံတချို့ပဲ ဆောက် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာမှ မဆောက် ဘဲ မြေလွတ်အဖြစ်ထားတဲ့ မြေက ၁၅ ဧက လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီ နေရာ မှာဆို ချုံနွယ်တွေနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ ထားခဲ့တာပါ။ တပ်ပိုင်မြေ တွေ ပြန်ပေးမယ်လို့ သတင်းထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ တခြား ဒေသကနေ ချောင်းသာကို လာနေကြတဲ့ ကျူးကျော် သမားတွေက အဲဒီ မြေလွတ်တွေမှာ ၀င်နေဖို့ ပြင်နေကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့ မြေတွေကို ကျူးကျော်တွေ ၀င်လာမှာ စိုးလို့ ခြံစည်းရိုးခတ် တာ တွေ၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်တာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ”ဟု တရားစွဲ ခံနေရသူ တဦး ဖြစ်သည့် ဦးကိုကိုလွင်က ပြောသည်။
“ကော်မရှင်က မသုံးတဲ့ မြေတွေ ပြန်ပေးဖို့ အကြံပြု ထားတယ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကလည်း ဒီအစီရင်ခံစာတွေကို တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုပြီးသွားပြီ၊ ကာချုပ်ကလည်း ပြန်ပေးမယ် ပြောထား တယ်၊ ပြန်ပေးမယ့် အသံတွေ ထွက်တဲ့ နောက်ပိုင်း ဘာတွေ ဖြစ်လာလဲ ဆိုတော့ တပ်တွေကနေ မူလ မြေပိုင်ရှင်တွေကို ပြန်ပေးရမှာ စိုးလို့ ပိုင်နက် ကျူးလွန်မှု၊ အကျိုး ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ တရား စွဲ လာတာ တွေ့ရတယ်၊ ဒါတွေက လုံးဝ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ”ဟု လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုထွန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ ထံသို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အထိ မြေသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တင်ပြ တိုင်ကြားစာပေါင်း ၅၆၅ စောင်ရှိပြီး စစ်တပ် သိမ်းမြေ ၂၄,၇၀၇၇. ၆၀ ဧက ရှိကြောင်း ယင်း ကော်မ တီက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည့် အစီရင်ခံစာ အရ သိရသည်။